TWITTER ပေါ်တွင်ငွေရှာဖို့ဘယ်လို - တွစ်တာ - 2019
နီးပါးတိုင်းလူကြိုက်များလူမှုကွန်ယက်အခုအချိန်မှာအဲဒီမှာသင့်အကောင့်မှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်, နှင့် Twitter - အဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းမှာမိုက်ကရိုဘလော့ဂ်များဝန်ဆောင်မှုအတွက်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဘဏ္ဍာရေးပြန်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။
Twitter ပေါ်တွင်ငွေရှာဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ, ဤအသုံးပြုရန်, သင်သည်ဤပစ္စည်းကနေလေ့လာသင်ယူမည်ကိုကြားလိုက်ပါ၏။
ကျနော်တို့ဝင်ငွေတစ်ခုအပိုဆောင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်တွစ်တာများအတွက်ဝင်ငွေရရှိမှုကိုပိုသင့်လျော်သောပထမဦးဆုံးအရာသတိပြုပါ။ သို့သော်ဆင်ခြင်တုံတရားအဖွဲ့အစည်းနှင့်ငွေရှာခြင်းအတွက်စီး၏ညာဘက်ပေါင်းစပ်နှင့်အတူ, ဒီလူမှုရေးကွန်ယက်ကိုတစ်ဦးအလွန်လျောက်ပတ်သောပိုက်ဆံ generate နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
၏သင်တန်းအနည်းဆုံးရီစရာ, "သုည" အကောင့်နဲ့, တွစ်တာပေါ်တွင်ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစား။ လေးလေးနက်နက်ပရိုဖိုင်း၏ငွေရစေခြင်းအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့, သင်ကအနည်းဆုံး 2-3 တထောင်နောက်လိုက်များသင့်ပါတယ်။ သို့သော်ဤဦးတည်ချက်အတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းပြီးသား 500 subscribers ရောက်ရှိပြုနိုင်ပါသည်။
Method ကို 1: Advertising ကြော်ငြာ
တဖကျတှငျရ, Twitter ငွေရှာခြင်းအတွက် option ကိုအလွန်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအတိပ်တှငျကြှနျုပျတို့အခြားလူမှုရေးကွန်ယက်များ, ဝန်ဆောင်မှုများ, ဝက်ဘ်ဆိုက်များ, ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ပင်တစ်ခုလုံးကိုကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကြော်ငြာအတွက် profile များကိုထုတ်ဝေ။ ဒီအဘို့, အသီးသီးတစ်ဦးငွေသားအကျိုးကိုခံရ။
သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်ဝင်ငွေမှကျနော်တို့ဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့စာရင်းပေးသွင်းထားသူအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူတစ်ဦးအကြောင်းအရာအလိုက်အကောင့်ရာထူးတိုးကြသင့်ပါတယ်။ ဒါကသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတီးဝိုင်းမှာလည်းတိကျတဲ့ပရိသတ်ကိုကိုသွားဖို့လိုအပ်ကြောင်း, အဓိကကြော်ငြာရှင်များကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဆိုသည်ကားရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, ကားများ, ခေတ်မီနည်းပညာ, အားကစားဖြစ်ရပ်များ, သို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများ၏အခြားအသုံးပြုသူများရန်သင့်စာပမြေား၏အမြောက်အများ။ သင်သည်လည်းအတော်လေးရေပန်းစားလျှင်အညီ, ထို့နောက်သင်အရှင်အလားအလာကြော်ငြာရှင်များမှဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ခြင်း, တစ်တည်ငြိမ်ပရိသတ်ကိုလွှမ်းခြုံရှိသည်။
သင့်ရဲ့ Twitter အကောင့်အထက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီလျှင်ထို့ကြောင့်, ကကျိန်းသေတန်ဖိုးရှိကြော်ငြာပေါ်င်ငွေစဉ်းစားပါ။
ဒါကြောင့်သင်မည်သို့ Twitter မှကြော်ငြာရှင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဖို့စတင်သလဲ? ဒီလိုလုပ်ဖို့, အထူးအရင်းအမြစ်များအများအပြားရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာသင်ထိုကဲ့သို့သော QComment နှင့် Twite အဖြစ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာသင့်ပါတယ်။
ဤဆိုဒ်များန်ဆောင်မှုများဖလှယ်မှုများ၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ကြပြီးသူတို့တစ်တွေဒင်္ဖြစ်ပါတယ်အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်ပါသည်။ ဖောက်သည်ဘလော့ဂါများ (ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုလိုသည်) မြှင့်တင်ရေး tweets နှင့် Retweet အဖြစ် folloving များအတွက်လစာထဲကနေဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ သို့သော်ဒေတာဝန်ဆောင်မှု၏အားသာချက်ယူပြီး, ကောင်းသောငွေရှာဖို့, ကအောင်မြင်ဖို့အလားအလာမရှိပါ။
လေးနက်သောကြော်ငြာဝင်ငွေတစ်ဦးထက်ပိုသောအထူးပြုအရင်းအမြစ်များအပေါ်ရရှိသောနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားလူကြိုက်များ advertayzing-ချိန်းနေသောခေါင်းစဉ်: Blogun, Plibber နှင့် RotaPost ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်ရှိသည်ပိုပြီးစာဖတ်သူများ, သင်ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်အတွက် get ပိုလျောက်ပတ်သောကမ်းလှမ်းမှု။
ထိုကဲ့သို့သောငွေရှာခြင်းအတွက်ယန္တရားတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါအောကျမေ့သင့်ကြောင်းအဓိကအရာ - တစ်ဦးတည်းသာကြော်ငြာစာပမြေားနဲ့တိပ်ခွေ, အဘယ်သူမျှမဖတ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်, သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအပေါ်စီးပွားဖြစ် tweets အားမရ, သင်အများဆုံးအမြတ်အစွန်းအဘို့ကြိုးစားကြသည်မနေသင့်။
Method ကို 2: Affiliate အစီအစဉ်များ
သည် "Affiliate" ပေါ်တွင်ဝင်ငွေရရှိမှုလည်းတွစ်တာအကောင့်မှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြော်ငြာမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဤအမှု၌နိယာမအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်။ စီးပွားဖြစ်စာပမြေား၏ပထမဦးဆုံးမူကွဲမတူဘဲ, Affiliate အစီအစဉ်များငွေပေးချေမှုတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသတင်းအချက်အလက်ပို့စ်တင်နှင့်စာဖတ်သူများကျူးလွန်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အပြုအမူများအတွက်တကယ်တော့မထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များဖြစ်သကဲ့သို့, စည်းကမ်းချက်များ "Affiliate" ပေါ်တွင် မူတည်. :
link ကို tweet ပေါ်မှာအသွင်ကူးပြောင်းမှု။
ဝယ်ယူမှုသင့်ရဲ့ subscriber များအားဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ထို့ကြောင့် Affiliate အစီအစဉ်များအနေဖြင့်ဝင်ငွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်လိုက်များ၏အပြုအမူအပေါ်လုံးဝမှီခိုသည်။ ထို့ကြောင့်အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုများ, ထုတ်ကုန်, နှင့်အရင်းအမြစ်များမြှင့်တင်ရန်ဆောင်ပုဒ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် microblog ၏ညှနျကွားနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအလားတူဖြစ်သင့်သည်။
ထို့အပြင်စာဖတ်သူကိုကျွန်တော်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် Affiliate link ကိုကြော်ငြာဖြစ်ကြောင်းသိရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်မြှင့်တင်ရန်အကြောင်းအရာလိုက်ဖက်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ tweets တိပ်အတွက် embedded ရမည်ဖြစ်သည်။
သဘာဝကျကျ, Affiliate အစီအစဉ်များ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွစ်တာအကောင့်နေ့စဉ်ပရိသတ်ကို, ဆိုလိုသည်မှာထံမှမြင်သာထင်သာခွဲဝေရယူနိုင်ဖို့အတွက် ယာဉ်အသွားအလာအတော်လေးသိသိသာသာဖြစ်သင့်သည်။
ကောင်းပြီ, ဘယ်မှာဤ "Affiliate" အတှကျရှာဖှေရသနည်း သိသာထင်ရှားမှုအရှိဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံး option ကို - မိတ်ဖက်စနစ်များ, အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အခြိနျမှနျမှ, သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုတစ်ဦးအကြောင်းအရာအလိုက်ရုပ်ပုံသို့ကောင်းစွာ fit ကြောင်းထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုတွိထုတ်ဝေရန်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောမက်ဆေ့ခ်ျအတွက်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်အွန်လိုင်းစတိုးများတွင်ရာထူးတိုးထုတ်ကုန်ဖို့သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာမှ link တစ်ခုသတ်မှတ်။
ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူတိုက်ရိုက်မိတ်ဖက်အဖြစ်တည်ဆောက်ရန်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ microblog ၏စာဖတ်သူများများ၏အရေအတွက်ထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်ဒီ option ကကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အတူတူလဲလှယ် - ကောင်းပြီ, သင့်ကို Twitter-အကောင့်နောက်လိုက်များ၏အသံအတိုးအကျယ်အခြေစိုက်စခန်း, အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဝါကြွားခြင်းမဟုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်။ ဥပမာအားဖြင့်, Affiliate လင့်များနှင့်အတူ Tvayt.ru အလုပ်အပေါ်ကိုပင် subscriber များအားတစ်ဦးအနည်းဆုံးအရေအတွက်ကအတူရှိနိုင်ပါသည်။
Method ကို 3: အကောင့်စီးပွားဖြစ်
Twitter တွင်အခြားလူများ၏ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကြော်ငြာနှင့်အပြင်၌သင်တို့ကိုအောင်မြင်စွာသူတို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ တွစ်တာအကောင့်ကိုပိုင်ဆိုင်ကိုသင်အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုကြင်နာသို့လှည့်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတိပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
အနာဂတျမှာ, ဤအမျိုးအစား tweets ထုတ်ဝေရန်: နာမတော်နှင့်ထုတ်ကုန်၏အကျဉ်းဖော်ပြချက်၎င်း၏ပုံရိပ်ကိုနှင့်က link တစ်ခု။ "Link ကိုက" Bitly သို့မဟုတ် Google URL Shortener တူသောအထူးဝန်ဆောင်မှုများအားဖွငျ့လျှော့ချဖို့နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: Google ကအတူလင့်များဖြတ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Method ကို 4: ငွေရှာခြင်းအတွက် "ဦးထုပ်" ကိုယ်ရေးဖိုင်
တစ်ခု option ကိုင်ငွေအကောင့်လည်းရှိပါသည်။ သင့်အကောင့်အလုံအလောက်ရေပန်းစားသည်လျှင်, သင်သေချာပေါက်သင့်ရဲ့ tweets အတွက်နေ့စဉ်အပေးအယူမှမလိုအပ်ပါဘူး။ "ဦးထုပ်" ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို - ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, သငျသညျအမြားဆုံးသိသာ "ကြော်ငြာအာကာသ" မိုက်ကရိုဘလော့ဂ်များဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အဓိကပုံရိပ်ရဲ့ contents သတိထားမိနှင့်အနောက်တိုင်း tweet များနှင့်လွဲချော်လျက်နှင့်မနိုငျသောကွောငျ့ "ဦးထုပ်" တွင်, များသောအားဖြင့်အများကြီးပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကြော်ငြာရှင်များမှဖြစ်ကြသည်အလွန်ခက်ခဲသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကြော်ငြာဒီလိုမျိုးအများကြီးပိုစျေးကြီးသည်ရေးသားချက်များအတွက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ ထို့အပြင် "ဦးထုပ်" ၏ငွေရှာခြင်းအတွက်တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ချဉ်းကပ်ကောင်းတစ်ဦး passive ဝင်ငွေပေးနိုင်ပါသည်။
Method ကို 5: အကောင့်ရောင်းအား
မြှင့်တင်ရေးနှင့်အခြားအသုံးပြုသူဝန်ဆောင်မှုရောင်းချခြင်း - တွစ်တာမှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်အရှိဆုံးအလုပ်သမား-intensive နှင့်ရီဖိုင်းနည်းလမ်း။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းလုပ်ရပ်များ၏ sequence ကိုဖြစ်ပါသည်:
ဤသည်အလွန်အကောင့် Register ။
"uchetku" ဟုအဆိုပါအထူးကု site ကိုအတွက်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်တွစ်တာစဝယ် Find နှင့်ရောင်း။
ဒါအခါတိုင်း။ အမြတ်အစွန်း - ဒါဟာ Twitter ပေါ်တွင်ဝင်ငွေ၏ထိုကဲ့သို့သောလမ်းဆွဲဆောင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, ယေဘုယျအားဖြင့်နိုင်ခြေမရှိပေ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြုန်းမကြာခဏရရှိခဲ့သည်ဝင်ငွေအဆင့်ကိုက်ညီတဲ့ပါဘူး။
ဒါကြောင့်သင်က Twitter တွင်သင့်အကောင့်မှငွေဝင်၏အခြေခံနည်းလမ်းများနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းတယ်။ သင်မိုက်ကရိုဘလော့ဂ်များ service ကိုအသုံးပြုရာတွင်စတင်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဒီအကျိုးတူ၏အောင်မြင်မှုကိုယုံကြည်ဖို့မမလိုပါဖြစ်ပါတယ်။